३ सयको सित्तैमा जाँच मोटोपना रोगको मूल ः डा. भट्टराई – Sabaikoaawaj.com
३ सयको सित्तैमा जाँच मोटोपना रोगको मूल ः डा. भट्टराई
शनिबार, पुस ८, २०७४ 5:28:49 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, ८ पुस
पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. सुवास भट्टराईले नेपालीमा बढ्दै गएको मोटोपना विभिन्न रोगको मूल भएको औंल्याएका छन् । खानपानमा हेलचेक्रयाई, मादक पदार्थ, धूमपान, भात नै खानुपर्ने बानी, व्ययाममा कमी लगायतका कारण मोटोपन बढेको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिले मोटोपन समृद्धिको संकेत मानिन्थ्यो, अहिले रोगको मूल भएको प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
सञ्चय बहुउद्देश्यीय सहकारी सिर्जनाचोक र युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि (युआरएल)को संयुक्त आयोजनामा शनिबार भएको रगतमा हुने खराब बोसो(टिजी) र मधुमेहसम्बन्धी निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविरमा डा. भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । शिविरमा ३ सय ७ जनाको सित्तैमा रक्तपरीक्षण गरिएको छ ।कार्यक्रममा उनले मोटोपनकै कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात जस्ता रोगको जोखिम बढ्ने औैंल्याए । हरेक पेट दुखाईलाई ग्यास्ट्रिक मान्नेहरु धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीमध्ये १० प्रतिशतमात्र ग्यास्ट्रिकका बिरामी भएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘९० प्रतिशतलाई पेट दुखाइको कारण अरु नै हुन्छ ।’
युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य चेतना बढाउँदै रोग लाग्नै नदिने परिस्थिति सिर्जना गर्न र सुरुमै परीक्षण गरी रोगको पीडा, खर्च र हैरानीबाट मुक्त गर्न यस्ता कार्यक्रम सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । युआरएलले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा निःशुल्क शिविर आयोजना गर्दै आएको छ । यो ४२ औं शिविर हो ।प्रबन्ध निर्देशक पन्तले राजधानी र विदेश पठाएर लामो समय रिपोर्टको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने परीक्षणहरु पोखरामै उपलब्ध भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘धेरै संवेदनशील परीक्षण यही उपलब्ध छन् । त्यतिमात्र होइन, कतिपय परीक्षणका लागि राजधानीबाट समेत युआरएलमा नमूना पठाइन्छन् ।’
कार्यक्रममा सञ्चय सहकारीका उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा पौडेल, मातृभूमी सहकारीका अध्यक्ष ईश्वर सुवेदी, कार्यक्रम संयोजक भगवान पोखरेल लगायतले बोलेका थिए । सहकारीका अध्यक्ष नारायण कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सञ्चालन सचिव गणेश थापाले गरेका थिए ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस ८, २०७४ 5:28:49 PM